Oromo Free Speech: DUULA OGBARRUU OROMOO
Adoolessa 13, 2013
Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan Waaqa Gurraacha Garaa Garbaa Leemmoo Garaa Taliilaa isin haaqaqqabu.Yeroo garaagaraatti barruulee ‘SIIFSIIN’ jedhamuufii kitaabota Afaan Oromoo hedduu maxxansiisaa jiraachuun keenya Oromoo biratti kan beekamedha. Ammas hojiin kun hojii akka abidda saafaa itti fufudha…
Akkuma beekamu aartiin saba tokkoo sabicha bakka bu’e dubbata. Waan aartii kanaa keessaa ammoo barruu/barroon isa tokkodha. Dhimmi afaaniin dubbatamu gara barreeffamaatti yoo dhufe ammoo nuti dabarrus bakka keenya bu’ee dhaloota itti aanuuf ergaa hinbanne ta’ee jiraata. Afoolli Oromoo beekumsa hammaaramee hindhumne of keessaa qaba; waa’een Oromoos barreeffamee dhuma natti hinfakkaatu.
Kabajamtoota Lammii Oromoofi Leellistoota Aadaafi Afaan keenyaa...
Barruun isin nuuf ergitan walaloo, asoosama gabaabaa, Afoola Oromoo (weedduu, eebba, Geerarsa, Mammaaksa, oduu durii, Hibboo Oromoo, baacoo Oromoo, tapha ijoollee, Faaruu Waaqaa, faaruu gootaa, faaruu Asmaarii….) ta’uu danda’a.
Barreessitoota Oromoo ka’aa jiran kana guddisuuf gorsuuf akka mijatutti waldaan akka Addunyaatti beekamtii qabu tokko hundeeffamuutu irra jiraata. Innis Waldaa Barreessitoota Addunyaawaa (International Oromo Writers Association) kan jedhu dhaabbachuu qaba. Kaayyoonsaa guddaan ammoo guddina afaaniifii Aadaa Oromoo irratti kan hojjetu ta’uu qaba. Barreeffamni barreeffamu kun Afaan Oromoo qofaan osoo hintaane, Afaan Ingiliziinis barreeffamee guutummaa addunyaa qaqqabuu qaba. Kana keessatti waa’een Oromiyaa akka addunyaatti beekamtii guddaa qabaatu gochuutu eegama…
Galma ga’insa guddinaafi dagaagina ogbarruu kanaaf Oromoon hundumtuu dirqama lammummaa qaba. Kunis qooda fudhannaafi gumaacha taasisuu gaafata. Dubbisanii qeequu, dubbisuufi dubbisiisuun, fuudhanii raabsuun akka namni dubbisu taasisuun gumaacha guddaadha. Ergaan takkaa duula barbadeessa wallaalummaa kanarratti waliin akka hojjennu abdiin qaba. Bara itti aanu kanatti hawaasni Oromoo biyya keessaas taatan kan biyya ambaa jiraattan beekumsa sammuu keessan keessaa lammii keessaniif akka karaa barruutiin arjoomtan abdiin qaba. Isin eegaa jirras.
6. Dargaggoota Oromoo ‘Washington DC kitaaba keenya akka itti erginee saba Oromoo faana walbaruuf haamilee cimaan nucina dhaabachuu isaaniif,
Waan maqaakeessaN qabattee teessu kan isin dhalootaaf arjoomtanii lafa kanarraallee godaantan maaltu sinharka jira?
Ofumakeenyaaf qofa jiraannammoo Oromiyaa nubarsiistee asiin nugeesseef gumaacha qabna laataa?
Amma gaaffii baay’isuunkoo gaarii mitiiti lammiikoo dogoggorakoof na ofkalchaati duula Ogbarruu bara kana jalqabne kana keessatti qooda guddaa qabaadhaa…
Kitaabni keenya yoo maxxanee ba’u, yoo xiqqaate bu’aa armaan gadii niargamu.
Afaan Keenya guddatee sadarkaa addunyaatti dubbatamuu mala.
Beekumsi nuti qabnu karaa baduufi du’uu hindandeenyeen dhaloota itti aanuuf darba.
Waa’ee madda seenaa Oromoo ilaalchisee falmii dheeraan booda yaada ta’erra niga’ama.
Tokkummaan walitti dhufu kun fuulduratti akka waldaatti ijaaramuurra darbee galma biyyoolessaa tokko ijaarratee keessatti dhimma biyyaaf ta’u hedduurratti hojjechuu danda’a.
Humni kun kitaabota waa’ee dhimma Oromoo ilaallatan kan addunyaa mararra tamsa’ee jiru hunda walitti qabee olkaa’uun madda qorannoofi qo’annoo Orommootiif ka’umsa lafa kaa’uu danda’a.
Waa’ee afaaniifi uummata Oromoo qo’achuuf balabala guddaatu banama.
Kallattii Afaaniifi aadaan uummata Oromoo dagaaguu danda’utu diriirfama.
Aadaa, seenaafi afaan uummata Oromoof madda gaariitu uumama.
Lammiilee Oromoo alaaf keessaatu walgargaarsaafi hariiroo gaariitu uumamuu danda’a.
Humna ijaaramu kana keessatti beektonni seenaa, Antiropoloojii, Saayikoloojii, saayinsii siyaasaa, sirna Gadaa geggeessan, aadaarratti qo’annoo qorannoo kan taasisan qooda fudahttootta ta’u.
Tokkummaan walfaana ka’uu barreessitoota kanaa kanaa gaaffii: maal hojjedhu? Eessatti hojjedhu? fi Madda eessaan argadha? jedhaniif deebii kan kennudha. Dhalootaaf waatu ol kaa’ama. Beektonniifi maanguddoonni Oromoo bakka deemanii itti waa gumaachan argatu. Dhalataan bakka deemee waa dubbisuufi waa baratutu mijaa’aa. Waantonni bakka tokkotti kuufamanis humna argatu; akkasumas, bu’aa buusuu danda’u.
Seenaan saba Oromoo gadifageenyaan qo’atama.
Qo’annoon Oromoo irratti adeemsifamu bakkaafi toora qabata.
Beektonni qo’annoo Oromoorratti adeemsisaniif madda guutuu argatu.
Waa’een Oromoo baa’yeen qindaa’manii ol kaa’amu.
Hayyoonni Oromoo iddoo garaagaraarraa qo’annoo garaagaraa taasisan iddoofi madda keessatti waa gumaachan argatu.
Eebbi Kitaabotaa bara dhufuu eessa?
Bakki eebba kitaabota kanaa ‘galma Miliniyeemii Finfinnee’ keessatti ta’a. Kana keessatti Mootummaan naannoo Oromiyaa akka nugargaaruufi galma kana nuuf eeyyamsiisu danda’u abdii qabna. Hojii kitaaba barreessuutiin sammuu namaa misoomsan, akka qaama misooma birootti ilaalamaa waan jiruuf yeroon kun ogbarruu Oromootiif yeroo gaariidha. Kana ilaalchisee heerri mootummaa naannoo Itoophiyaa keewwaata 5 lakk 1 qooqni Itoophiyaa kamiyyuu mootummaa biratti beekamtii walqixxee qabaatu “All Ethiopian Languages shall enjoy Equal state recoginition” jedha. Dabalataanis heerri mootummaa Itoophiyaa keewwata 39/2 keessatti waa’een afaanii ibsameera. Sabni, sablammiin, uummanni Itoophiyaa kamiyyuu mirga qooqa isaatiin dubbachuu, barreessuu, qooqa isaa guddisuufi aadaa isaa ibsuu, gabbifachuufi babal’isuu akkasumas, seenaa isaa kunuunsuu qaba jedha.
Mala gurgurtaa yookaan qaqqabsiisa kitaabaa
Barreessitoonni 100 kaanu kun yoo kitaabota 100,000 maxxansine, kudhan kudhan walii gurguruu qofaan kitaabota keenya haala salphaan biyya keessaafi alatti tamsaasuu dandeenya. Kana cinattis Oromiyaa keessatti manni raabsaa kitaaba Afaan Oromoo tokko tokko mul’achaa waan jiraniif abdiin jira.
Hojiin kun ciminaan kan itti fufuu qabu waan ta’eef ijaarsi addaa hundeeffamuu qaba. Kana ammoo waldaan barreessitoota Oromoo biyya keessa jiru itti gaafatamsaa nifudhata.
Namni fedhasaatiin wixinee (proposal) qopheessee qaama dhimmi isaa ilaalaallatu maraan nuuga’uu malu nubarbaachisa.
Koree dhimma kana qindeessuu barbaadu ijaaruuf fedhiin jiru utuu adda nuuf ba’e gaariidha.
Kitaabota waa’ee Oromoo ilaallatanii garuu Afaan biroon jiran gara Afaan Oromootti deebifachuuf gumaacha ogummaa barbaanna.
Oromoon kamuu kan kitaaba barreessee of harkaa qabuufi barreessuutti jiru of nuuf mul’isuun duula Ogbarruu bara 2014 irratti nufaana haaromsa guddaa seena qabeessa kanarratti nufaana lammiisaaf gumaacha akka taasisu.
Namni kamuu wiirtuu kitaabonni maxxanan kun irratti gurguramuu danda’an irratti akka dhuunfaan itti gaafatama fudhachuun yoo xiqqaate hiriyaa 10 of jalatti ijaaruun kitaabonni maxxanan akka dirqamaatti mana Oromoo kamuu keessa seenuu akka danda’an irratti hojjechuu..
Ariifannaanis ta’e beekumsa dhabuun dogoggora akka hingooneef hangafti keenyas ta’e namni hunduu yaada qabu hundaan akka nucina dhaabatuuf dhaamsa dabarfanna. Hubadhaa lammiiko! Qabeenyi guddaan kuufama yaada hayyootaati!!
Miidiyaan biyya keessaafi alaa gama danda’ameen akkuma amala kanaan duraatti hojii barruu dargaggoota Oromoo kana qilleensarra nuuf oolchuun hawaasni keenya dammaqee gama barnootaan, dubbisuufi argannoo garaagaraan akka qixa saba kamiyyuu ga’uu danda’u beekee akka oonnatuuf sagantaa garaagaraan barsiisuu…
Hojiin barreessuu nuti irratti bobbaanee jirru kun saayinsaawaa akka ta’uuf, qorannoo garaagaraan akka deggaramu gochuu, muuxannoon biyyoota biroos akkaataa duudhaafi safuu uummata keenyaa miidhuu hndandeenyeetii madaqee muuxannoon kan irraa argamuufi Oromoo har’aa takinooloojii ammayyaatti fiduuf muuxannoo nuu qooduu…
Posted by Oromo firee speech at 12:37 PM